Ihe a na-amaghị banyere lipstick
Site n'akụkọ ihe mere eme, ọ bịara mara na eze Cleopatra, iji mee ka egbugbere ọnụ, jiri ngwakọta pụrụ iche. Ndị a bụ àkwá ants na ngwakọta nke na-acha uhie uhie. Ọzọkwa, ịmepụta akpụkpọ pel, gbazee azụ na akpịrịkpa. Ọbụna mgbe e mesịrị, mgbe oge edozi nke Alakụba bịara, e mepụtara ụdị nkwonkwo siri ike. Ọ bụ dọkịta Andalusian chepụtara ya (Arab site ná mmalite) Abu al-Qasim al-Zahravi. Dọkịta ahụ nwekwara lipstick a na-enweghị atụ na-ebugharị, nke yiri agba.
Ma ndị Katọlik na Chọọchị Katọlik megidere nnyefe nwanyị dị otú ahụ. Ha kwuru na lipstick na-ebibi ndị inyom - nke a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nbibi nke onyinyo nsọ nke Virgin Mary. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nanị n'ihi na egbugbere ọnụ na-adaba ná mkpagbu ma kwupụta ọkwa ndị mmadụ.
Ma n'England, n'azụ narị afọ nke 16, mgbe onye ọchịchị ahụ bụ Elizabeth the First, ihe ọhụrụ ọhụrụ malitere ịmalite ejiji - akpụkpọ ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha, bụ nke ụrọ lipstick ọbara na-agbanye. N'ụbọchị ndị ahụ, a na-etinye lipstick na-adabere na beeswax ma na-agbakwụnye mmepụta ihe ọkụkụ osisi na-agbakwunye ya mejupụtara. Ma, ọ dị mwute ikwu, oge ejiji maka egbugbere ọnụ anaghị adịte aka. N'afọ 1653, a na-akpọ òtù ndị nduzi nke pastọ ahụ na lipstick, dị ka ihe ndị ọzọ edozi ahụ, aghụghọ aghụghọ. Ndị omeiwu England na-abanyekwa n'ụzọ a. N'afọ 1770, e nyere iwu iwu pụrụ iche, bụ nke ha kwupụtara na ndị inyom na-arata nwoke nwere enyemaka nke ịchọ mma kwesịrị ịdaba n'ụdị ndị amoosu.
Ma ọ bụghị nanị na pastọ na nzuko omeiwu bụ ndị na-emegide ihe ịchọ mma, Queen Victoria na-emeso ha ihe. Ya mere, n'afọ 1800, o kpebiri na ịkpọ oku etemeete ga-eji akọ kọwaa.
Omume a dịgidere rue narị afọ nke 19. Ruo mgbe ahụ, a na-ewere ya na ọ bụ ihe na-egosi na ọ bụ nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ. Ma mmegide nke ụmụ nwanyị ka ọbụna siri ike. Kemgbe oge ndị ahụ, esemokwu nke nwoke na nwanyị malitere, ọtụtụ ndị na-anọchite anya mmekọahụ mara mma mere lipstick. Otu n'ime ha bụ Sarah Bernhardt, o kwukwara na ịchọ mma bụ ụkpụrụ omume ndị ọzọ karịa ihe kachasị achọpụta.
Oge ụtụtụ amalite
Na nani ọkara nke narị afọ nke 20 ghọtara na nchọpụta nke lipstick na ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị. N'afọ 1949, e mepụtara ígwè ọrụ mbụ maka mmepụta nke egbugbere ọnụ. A na-eji ngwaahịa pụrụ iche na plastic tubes kwadoro ngwaahịa. Ebe ọ bụ na e mepụtara ma mepụta ngwa ngwa ahụ, ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ malitere ibelata, ya mere ọ dị ọtụtụ ndị inyom.
Ihe kachasị amara
E mere ka Gris oge ochie dị iche site na eziokwu bụ na ndị na-agba akwụna na-acha uhie uhie uhie. Ya mere ndị ahịa nwere ike ịmata ha. Ihe dị iche dị iche iche dị mma n'ihi na ndị inyom ndị ọzọ anaghị eji etemeete.
Na England, a kpọrọ lipstick obere obere eserese. N'afọ 1650, ndị omeiwu gbalịrị ime ihe niile ga-eme iji gbochie egbugbere ọnụ, ma ha enwetaghị nkwado.
Na Alaeze Ukwu Rom, ọ bụkwa omenala na -eme egbugbere ọnụ na egbugbere ọnụ na ndị na-agba akwụna. N'otu ụzọ ahụ, e nwekwara ụmụ nwoke ndị na-acha egbugbere ọnụ ha nwere ike ịmata.
Dị ka ọ dịghị ndị ọzọ, George Washington ji eji ejiji: ọ na-ese egbugbere ọnụ ya, onyinyo ya na wig.
Na Kansas, na mmalite 1915, ha chọrọ ịmepụta iwu pụrụ iche. Ụmụ nwanyị ndị dị ihe karịrị afọ 44 ekwesịghị ịbụ ndị nwere ikike imepụta ihe na-egbu egbu, n'ihi na ha kere ụgha.
"Barmoral" bụ otu n'ime ntutu isi na-acha uhie uhie na-acha odo odo. Nke a bụ Elizabeth Elizabeth, bụ onye mejupụtara lipstick a mgbe ọ na-emechi ya.
Kwa ụbọchị na ụwa, 75% lipstick egbugbere ọnụ.
Mmiri oyi oyi dị ka ihe ịchọ mma maka anụ ahụ
Ngosikota maka ndi di ime
Nri November nke na-esi ísì ụtọ na YSL na Tom Ford
Ụdị ụmụ nwanyị ndị dị n'ụwa
Mkpa ndị dị mkpa na aphrodisiac Njirimara
Kedu otu nwanyị si esi ísì?
Broken Ring: Olee otú ịkọwa ihe oyiyi a na nrọ
Ihe mere na enweghị agụụ mmekọahụ
Curd na apple pie
Mkpụrụ ọgwụ na ụzọ ha si eji ndị mmadụ
Na-echegharị ihu nke ngwaahịa ahụ
A na-akpọ ọka wit n'ọkụ
Ọ bụrụ na ị chọpụtara na enyi gị bụ nwoke nwere mmasị nwoke
Otu esi ekesa ihe omume n'ime Ezin
Buns na currants
Uwe ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ-oyi 2013/14
Njirimara bara uru nke ose Bulgarian
Na-akụ na akpịrị: gịnị ka ọ bụ na otu esi ebu agha?
Ụmụaka na ụlọ akwụkwọ
Kedu otu esi akwadebe ihe ọṅụṅụ site na osikapa.
Imezi maka ihu site na ndị nkuzi a na-ewu ewu: Nkeji afọ 10 na-enweghị Botox na nkwado
Akwukwo nri mulffy
Ndụ ezinụlọ nke Igor Lifanov
Veal na quince